China One Way Lashing orinasa sy mpanamboatra | SPC
Ny One Way Lashings dia fomba haingana sy ara-toekarena hiarovana ny enta-mavesatra amin'ny fifamoivoizana nefa tsy mila mampiasa vola amin'ny fivorian'ny Ratchets sy Strap mahazatra.
Ity karazana rafitra fikapohana ity koa dia manolotra fotoana hafa ahafahana mitsitsy vola. Ny webbing dia azo omena anaty lavaka mitohy 100m na ​​amin'ny gony 200m izay azo ahena avy eo mba hahalalana ny halavany mba handraisana entana manokana. Vokatr'izany dia tratra ny tahiry satria tsy misy strap tavela avela tsy ampiasaina toa ny fivorian'ny karazana Ratchet Strap.
Hery matanjaka avo
Voamarina avy amin'ny TUV Rheinland
Mety amin'ny mpitatitra rehetra
Azo atambatra amin'ny rafitra fiarovana entana hafa - oh: kitapo dunnage
Fehin-kibo tokana hahazoana fiarovana (Lashing) amin'ny trano fisaka, lalamby ary fitoeran-javatra
Tsy misy atahorana ny ratra ho an'ny mpandefa sy ny entana amin'ny fampiasana na fanokafana ny tadiny
Solon'ny tadin'ny ratchet lafo vidy ary tariby mamatotra be loatra.
Teo aloha: Tady Van Logistic Strap
Manaraka: Sling Webbing maso amin'ny maso
Anaran-javatra sakany Fanapahan-kery Loko Fonosana
Fampiasana tenona fitorahana amin'ny Internet 25 800 fotsy 200m mitohy ao anaty kitapo poly iray.
28 1000 fotsy
35 2000 fotsy
38 3000 voasary
50 5000 fotsy
50 7500 voasary
Rehefa voaangona tsara ny fomba tokana hamotsorana ny One Way Lashing dia ny fanapahana ny tranonkala. Izany dia azo natao teo akaikin'ny buckle mba hampitomboana ny fihazonana webbing ampiasaina na amin'ny toerana mety rehetra.
Tokony homarihina fa ny buckles dia "One Way". Ie natao ho an'ny fandefasana ara-toekarena fomba iray ary tsy hampiasana indray. Ho fanampin'izany, ireo rafitra ireo dia manana fihenjanana amin'ny webbing amin'ny alàlan'ny fampihenana ratchet tsy miankina manokana natao hanan-kery lehibe amin'ny webbing ary avy eo esorina sy tazonina. Vokatr'izany dia mijanona ho ambany ny vidin'ny fivorian'ny fikapohana nalefa ary tsy azo esorina ny fehikibo raha tsy tapaka.